Farqiga mushaarradu wuxuu saaeeyn ku leeyahay lacagta hawlgabka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Marcus Eriksson/Sveriges Radio
Farqiga mushaarradu wuxuu saaeeyn ku leeyahay lacagta hawlgabka
La daabacay onsdag 6 mars 2013 kl 16.59
Farqiga u dhexeeya mushaharrada ragga iyo dumarku wuxuu sababaa in ay kala duwanaadaan dhaqaalaha la qaato xilliga hawlgabka. Haddaba inta farqiga mushaharooyinku yahay waxay ku xiran tahay meesha dalka laga deggan yahay.
Degmada Danderyd waxay raggu howl-gab u qaataan mushaarad labanlaabkeed ah midda dumarku qaataan, halka ay dumarka ku nool degmada Sorsele ka qaataan boqolkiiba 82 lacagta hawlgabka raggu qaato. Waxaa taas lagu soo bandhigay qoraal ay soo saartay Hay’adda Arrimaha Hawlgabka.
Kristina Kamp oo ku xeeldheer arrimaha hawlgabka waxay kula talineysaa dumarka xaasaska ah in ay sannado badan shaqeeyaan iyo in nimanku ay qayb ka mid ah lacagtooda hawlgabka ku wareejiyaan xaasaskooda.
Xafiiska Tirakoobka Iswiidhen wuxuu soo saaray qoraal muujinaya in dakhliga soo gala dadka hawlgabka oo ku dhashay dal kale uu aad uga yar yahay dakhliga soo gala dadka Iswiidhen ku dhashay. Farqiga dakhliyaduna waa uu sii kordhi doonaa kolka ajnebiga hadda shaqayn kara ay gaaraan da’da hawlgabka. Taasna waxaa sabab u ah in ajnebiga shaqa-la’aanta ahi ay badanaaba ka badan yihiin dadka iswiidhishka u dhashay.